Isongezelelo kwincwadi yakho 1: UMartin Vrijland
Ukuqhubeka ufunda eli nqaku, unokuba lilungu ngokunqakraza kwiqhosha 'lenkxaso yakho'. Oku kukunika ukufikelela kulo lonke eli nqaku. Lo mgaqo uyimfuneko kuba kufuneka ukuba uyifundile incwadi kuqala. Sele ulilungu ukusuka kwi- € 2 / ngenyanga kwaye ke ndixhase ukuze ndiqhubeke nokulwela inkululeko yakho.
tags: lokulinga, phantom, Isiphumo se-phantom, eziziimbalasane, igloves, lucifer, Luciferian, Luciferian, irabha, ukulinganisa, intsholongwane yendalo, Inkqubo yentsholongwane
14 Februwari 2020 kwi-14: 25
Ndisebenzisa izibhalo njengesibhalo esingumfuziselo .. Umzekelo, ndiguqulela ibali lika-Adam no-Eva belikhona apho, emehlweni am, iapile ifanekisela itekhnoloji yeTrojan yehashe eza kuzisa ukuxhwilwa komphefumlo, ngaphandle nje kokuba kukho ukumelana ngokomoya.
Imizobo enje ngeMusk, Kurzweil, Thiel njl, ke zingelosi eziwileyo (1/3) okanye iiAgent Smiths zeli lizwe ezizama ukufumana ukuphumla "kokuwa" ngenkohliso, ngolawulo lokuqonda njl njl.
Sinokwala nje ngokusebenzisana, iqala ngokwazisa kwaye iphele ngokungahambelani.
14 Februwari 2020 kwi-17: 33
Ndiyaqhubeka ndiyifumana eyona ingcaciso isisiseko kwaye isisiseko sisekelo sobukho, kodwa kwangaxeshanye ndibona izinto ezininzi ezihambelana nenkolo. 'Ukukhumbula nokwazi ukuba ungubani' , ngakumbi ivangeli epheleleyo / amasebe e-Pentekosti. Ngeenguqu ezimbalwa ezincinci kunye nokongezwa (njengoThixo, uYesu, ukuguqulwa, njl. Njl.) Ingabekwa "Imvuselelo."
Ndibona iphethini efanayo enokuvela njengoko ndaye ndanamava kwaye ndabona kwiicawa ezahlukeneyo eziboshwe ngamacandelo kunye namaqela, kunye nabantu "abayibonayo," abantu "abayiqondayo," iklabhu eyasungulwa, "abanyuliweyo," ke wena abathi, ngokungafaniyo nabanye, bangabotshwa yimida yeli lizwe / obu bukho / bokwenyani, abangasoyikiyo ukufa ngenxa yokuba banobomi “obunaphakade,” kwaye bayinkokeli kuyo yonke into ukupha nokuthetha, ukubonisa nje ukuba bakubonile ukukhanya kwaye ke kusebenza kwinqanaba 'eliphezulu'. Kukho nokuba zikho izinto abantu abaninzi 'ezingenakuchazwa' kwaye 'zinzima kakhulu', kwaye ke kufuneka sizamkele njengeziyinyaniso.
Wonke umntu makazenzele ngokwabo, kodwa mna ngokobuqu ukuba akusasebenzi. UYesu wammisela (ecinga ukuba amanye amabali achanekile) ithiyori kunye neemfundiso zakhe ngokukwazi ukutshintsha le nyani, le simulation yentsholongwane ('imimangaliso' eyaziwayo, iwayini emanzini, ukuhamba phezu kwamanzi, ukuphilisa abagulayo) , kwaye ekugqibeleni uvuke kwabafileyo). Kodwa nokuba akukho nto iyinyani, kuhle ukuba unokwenza izigidi zabantu ukuba zikholelwe ukuba iyinyani emva kokuba ushiye lo mhlaba.
Ukuguqulelwa kumbono wakho ungathi wakhumbula ukuba ungubani, eyinxalenye yenkqubo yoyilo lwantlandlolo, kwaye ekweso sikhundla wazibonakalisa enamandla kunale ntsholongwane, awayicacisa ngokubonisa ukuba ukusebenza kwale ntsholongwane kukulinganisa. isifo, imithetho yendalo, ukufa) inokupheliswa.
Kuyabonakala ke kum ukuba abantu abazi kakuhle ukuba abakweso sikhundla kufuneka bangangqinisisi ngamazwi kuphela, kodwa nangobungqina obubonakalayo bokuba siphila kuphela kumlinganiso wentsholongwane-njengoNeo kwi-Matrix. Logama ihleli kuphela 'ngokuqonda' kunye 'nokwazisa' ngaphandle kotshintsho olubonakalayo, enyanisweni akukho mahluko kwimbono yam kwinkolo. Emva kwayo yonke into: kufuneka ukholelwe nje ukuba ngudadewethu kwaye kunjalo, nangona ungakuqapheli konke konke ebomini. Ngenxa yoko abantu (amakholwa) bahlala beqala ukuxelela omnye komnye ukuba kukho ubungqina, kodwa ukuba obu bungqina abubonakali kwihlabathi langaphandle, kuphela kukukhanyiselwa kwengqondo okanye into enjalo. Ukuba kufuneka 'uzive' okanye 'ube namava' engqondweni yakho / kumphefumlo.
Ngale ndlela awukhethi nayiphi na ingxoxo yenjongo kunye nokufumana inyaniso kwangaphambili, kuba kwimbali iibhiliyoni zabantu bakhohlisiwe kuyo nayiphi na into nayo yonke into.
Ukuba ndiye ndachaza nge-avatar yam kakhulu - makube njalo. Ngamanye amagama, ingcinga enye ichazwa yiBible "njengendoda engeyoMoya ayamkeli into yoMoya kaThixo, kuba bubudenge kuye, kwaye ayinakuyiqonda, kuba inokugwetywa ngokomoya." Ndicinga ukuba kuyaphambana, kuba okwangoku, mna nabo bonke abanye abantu sisahlala kweli ntsholongwane, eyona nyaniso sinokuthi siyiqwalasele, kwaye ukuba nokulinganisa kunefuthe eliphambili kubukho bethu kuzo zonke iindawo, kwaye akukho mntu unokubonakalisa kuzo. baphumelele ekubalekeni okanye nasekucimeni ngokuyinyani loo mlinganiso (ngoko yi-Bhayibhile enye kuphela). Ke kuyehla nje kwithemba elisisiseko lokuba into elunge ngakumbi iya kuza emva kokufa. Ngamanye amagama: kwinkolo.
Ndiyathemba ke ukuba ingcinga yakho esisiseko yokucinga, njengoko ichaziwe ngokucacileyo kwincwadi yakho, ayibonwa njengendawo yokuphela, ingeyiyo 'inyaniso epheleleyo' engasafuneki ukuba iphinde ibuzwe, kodwa njengesikhululo sendlela eya ekuqondeni okutsha nakwimigangatho. . Ukuba kunjalo, ngenye imini kusenokubakho uvuko lwenene, oluyimfuneko kuguquko olusebenzayo nolusisigxina. Kude kube kukho naluphi na umbono obonakalayo, i-wmb 'ngumdlalo' - kuba kuya kufuneka. Kuba kwanomdlali omileyo kumdlalo wokulinganisa kwicala kwaye uyala ukuthatha inxaxheba, usenenxaxheba ixesha elide njengoko ebambelele kweso simaniso, kuba okuseleyo kusadlala ngokwenkqubo. Ke kungcono ndenze into engenanto kwaphela, nokuba iya kuba lilize emva koko.
14 Februwari 2020 kwi-19: 00
Ndiyayiqonda indlela osabela ngayo, kodwa khomba ukuba kukho ubungqina obuninzi, kubandakanya novavanyo oluphindaphindwe kabini olubonisa ukuba loo nto ikhona kuphela xa iphononongwa kwaye isitampu seLuciferian sinokuqatshelwa kuyo yonke indawo.
Ukuba ufuna ubungqina ezingqondweni zemimangaliso, ke oko kukwinqanaba lokulinganisa kwaye kusenokwenzeka ukuba noYesu wayenamandla okwenza imimangaliso, kodwa ngokuqinisekileyo olo luhlobo lwendima kaNeo kwaye ukuba ujolise ekuthini uphulukene nokwenzeka. ukuba umakhi wekhowudi yenqanaba lokulinganisa angenza yonke into ikhangeleke ngokungummangaliso kusetyenziswa ii-avatars kumdlalo awulawulayo.
Ekugqibeleni yonke into inokubekelwa phantsi kwinkolelo. Oku kusebenza kwindalo nakwinkolo. Kodwa fundisisa iingcebiso ezinikiweyo kwaye wenze nantoni na oyifunayo ngayo. Ngokombono wam, le ngcaciso iikhilomitha zihamba kakuhle.
Kanye xa imibutho yezenkolo iphinda ithethe ngokwazi, kodwa ngaphezulu koko kungumqobo "wokholo kukuqiniseka kwezinto ezingabonwayo ngabantu". Okanye ke: ukholo luthabathel 'indawo izinto ezingenakuchazwa.
Le nkcazo ichaza ngokuchanekileyo ukuba ukuba ulandela uhlalutyo kukuqiniseka kwezinto onokuzijonga kwaye ngenxa yoko unokuchaza.
14 Februwari 2020 kwi-19: 52
Ukuya kuthi ga ngoku ndakwazi ukufunda nokuphanda, abukho ubungqina obuqinisekileyo bokuba uYesu wayekho kwaphela. Ukuba unalo lwazi olichithileyo. Ke ndingathanda ukuyifunda. Baninzi ababhali abanjengoDoherty, amaxabiso, njl, njl. Abakholelwa ukuba 'uKrestu' wenziwe.
14 Februwari 2020 kwi-20: 20
Ngokuzenzekelayo, ndahamba ngebhodi ebonakalayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Bendingoyena mntu wokuqala kwiqela kodwa ndabona ngokusabela komntwana ukuba ungene ngokupheleleyo kulo wakhwaza ngaphandle. Emva koko ndenyuka nge-lifti kwaye yonke indlela enyukayo kuye kwafuneka ndihambe ukuya ngasekupheleni kwebhodi kwaye nditsibela phantsi. Kuba bendihlala ndigxile emgangathweni, ndiye ndahlala ndizolile, ndawa phantsi ndake phantsi zonke izinto zahamba zimhlophe. Kulungile ukuba ukongeze ezi vidiyo njengomzekelo kuba zithetha kakhulu ngemeko sikuyo (ngokwenyani) ukubandakanyeka.
Nam ndiyavumelana nokuphendula kuka-Xander, endifuna ukongeza. Ibhayibhile inemigca / imigca eliqela. Ukuba ufunda ungqimba lokuqala ke ifana nebhayibhile yabantwana enamabali angaqondakaliyo angaqondakaliyo. Ukuba ufunda umqolo wesibini okanye ucacisiwe ukuba ungokwembali yokoqobo kunye nendlela enokuguqulelwa ngayo kwixesha langoku. Emva koko sinomda we-ajenda yokucwangciswa kweskripthi esihlonitshwayo ngabantu abaninzi kwaye esenza konke ukuyenza ukuba yenzeke. Kodwa ezona zibalulekileyo ziileyibheli ezinzulu kwaye ke ufika kwinqanaba lokuba eli nqaku lithetha malunga nalo. Uya kufumana oku kuphela ukuba wenza uphando ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela kwaye uzihlangula kwindalo yakho. Oku akuthethi kuthi ndlela ntle (kodwa ekugqibeleni) kodwa ukuyikhupha kwaye ungafezekisi impembelelo yangaphandle. Iintsuku ezingama-40 kunye nobusuku ukuya entlango, ngaphandle kwe-WiFi kunye nemitha kunye nokunye okunjalo
Ndimele nditsho ukuba bekusoloko kungumbuzo wam # 1 wobunzima, siphi isiqalo nento yangonaphakade. Sasingazi ukuba yintoni ehlamba ngonaphakade ngaphambi kokuba sehle kwisimo sentsholongwane apho ixesha lingumgangatho.
Intsholongwane iyasinda kuphela ukuba ivumela inani labaphethe ukuba liphile, ngoko ke ayinakucima yonke into. Siphinde sehla ngokuzithemba ukuba siyakufumana ulwazi olufihliweyo ukuze sisinde. Ndiqinisekile ke ukuba, kweliphi na iqela (ngokwenkolo) yakho, kusoloko kukho ulwazi olukhona lokungxuma.
14 Februwari 2020 kwi-20: 23
Nokuba yinyani na, ayisiyiyo eyokuba iBhayibhile ayisiyonyani okanye
14 Februwari 2020 kwi-23: 13
Ngaba kusafuneka sibize i-Uni (1) ngoku? Kumaleko wokuqala, yonke into inokwenzeka kwaye kwangaxeshanye. Okwangoku yenye yeendlela ezinokwenzeka kwindinyana eyahlukeneyo engenasiphelo, ukusuka kuguqulelo olunye oluqhutywa ngendlela engafaniyo eneziphumo ezahlukeneyo. Kwimo yasekuqaleni simkele konke ukwazi
Sonke siyayilawula le nto, imfihlo kukuba sixhumene ngexesha lokwenyani, sibize umthombo. Ukuphakama kolwazi, kukhawuleza utshintsho oluvela ngaphakathi
15 Februwari 2020 kwi-09: 33
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ezinye iindlela zokuphendula zilahlekile kuba iwebhusayithi yaphuke izolo kwaye kuye kwafuneka ndibuyisele isipele
15 Februwari 2020 kwi-16: 13
Ingena ngokugqibeleleyo kweli nqaku,
Ukutya okudluliselwa kwihlabathi liphela, nyana okrelekrele oku.
Simsalabim wabhala wathi:
21 Februwari 2020 kwi-11: 23
Ukuba uya kuGoogle ngokudibeneyo kwii-Wingmaker, temples.org kunye ne-Souveign, uya kufika kwiiwebhusayithi ezininzi, apho intambo eqhelekileyo yokubaleka kwi-matrix yinto nje yeminye imisebenzi yokuphefumla edibene nokubonwa. Oku kubizwa ngokuba 'zii-Wingmakers' kukuzalwa okuphezulu ukusuka kumbindi wegalikhi. Bakwamnkele ukuba amashumi manani aphenjelelwa lullymination kunye nenkqubo yebhanki. Ngaba iryie Therie yakho iyaziwa kwaye ukuba kunjalo? Uziva njani ngayo?
21 Februwari 2020 kwi-12: 12
Ndicebisa ukuphinda ndifunde incwadi yam kwaye mhlawumbi nokuqonda okubhalwe kweli nqaku.
Andivumelani nombono wabenzi bamaphiko, kuba i-matrix ibonisa ukuba kukho uhlobo lwejele. Akukho ntolongo ukuba siphatha ikhowudi yeseli yethu yodwa.
Yonke into lulwazi. Inguqulelo yentsusa yoqobo ingumbono ocacileyo wolwazi. Le ndalo yinguqulo eyenziwe imizimba yolwazi lwentsholongwane (intsholongwane kaLusifa).
« Ngaba iTurkey iza kuyithatha i-Syria kwaye kuthetha ntoni ukuba ubudlelwane kunye ne-US, i-Russia ne-Iran?
Intsholongwane kaCorona, ukunqunyulwa okufutshane ekuphelisweni kwemali kunye nefuthe lezoqoqosho kwihlabathi liphela »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.182.398
UHarry makhulu op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
Ikhamera 2 op Uqikelelo: ukutshixwa kwezinto ezingxamisekileyo ukuthintela i-coronavirus (uqoqosho olulawulwayo lodilizo kunye nokuphangwa)
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi